AMISOM Oo Dumarka Soomaaliyeed u Aragta Qaniimo Dagaal! [Warbixin]. – Shabakadda Amiirnuur
December 5, 2017 8:12 am by admin Views: 583
Qol gees ah oo guriga ka mid ah Ayaan fadhiisannay, halkaas oo marki u horeysay ay isheydu qabatay gabar xijaaban oo aad u argagaxsan, naxdin iyo qajil ay ka hor istaageyso xittaa iney codka kor u qaaddo, ” Zahra..waa kan wariyihii aan ku sheegay” ayay tiri Maamo Caasho, oo ku sii dartay ” Ha cabsannin, xaaladdaada ayuu adduunka u bandhigayaa”.
Iyadoo gacanta ku taageysa ilmo yar oo dhismaha ku cayaarayay ayay tiri ” gabadheyda ayaa iga xanuunsatay, mana heli Karin lacag aan daawo ugu gato, waxaan maqlay in Cusbitaalka AMISOM ay lacag la’aan wax ku daweynayaan, waana u qaaday”.
“Anigaa qaladka lahaa, anigaa dhibkaan doontay, maxaan ka doonay gaaladaas” ayay ku ooysay, Maamo Caasho oo dhankeeda fadhisay ayaa ku aamusisay ” Ha dhihin saas, waa qadar Rabbi oo kugu dhacday”.
Zahra waxey tiri waxaan xusuustaa gaalkii i kufsaday inuu I dhahay ” Haddaa qof u sheegto, waan ku dilayaa”.
Ka sokow in magaceyga lagu daro liiska saxafiyyiinta afaaraha gaarka dabagala ee hadhow taas halis ku keento, waxaa dhammaan weydiimaheygii ay la kulmeen diidmo iyo in kuwa qaar ay kusoo gaabsadaan oraahdan caanka ah ee mar waliba lagu celceliyo ” Waan dadaaleynaa inta kaarankeena, waana baareynaa arrinka”.
Laakin sarkaal Boolis ah ayaa digniin toos ah I siiyay isagoo I dhahaya ” Wariyeyaashiina ajaanibta ah, waxaad u baahan tihiin wax badan inaad ka barataan xaaladda, oo aad joojisaan dacaayadaha”.
Wuxuu ku sii daray ” Waxani waa dacaayadihii Al-Shabaab, ee haddii aad badbaado rabtid, afkaaga ha laga nabad galo”.